Ahịa Ahịa: Ebe nrụọrụ weebụ, Ngwa, SMS & QR Koodu - Okomoko ma ọ bụ Chọrọ?
Site na 2015, na mobile Internet gafere desktọọpụ ojiji na n’afọ gara aga, ojiji ya jiri okpukpu abụọ. Ọtụtụ ndị na-eme mkpebi na-eji igwe mkpanaka iji nweta ozi ha chọrọ iji mee nhọrọ ịzụta. Ihe ruru 50% nke ohere ịntanetị nwere ike ghara ịhapụ site n'inweghi na itinye usoro mkpanaka maka ụlọ ọrụ ma ọ bụ akara. N'ime afọ ole na ole sochirinụ, pasent a ga-aga n'ihu. Ajụjụ bụ - Ọ bụ na ebe nrụọrụ weebụ gị kachasị maka ntanetị weebụ ma ọ bụrụ na ị na-abanye n'ahịa na-eji mobile?
Na October 27th, John McTigue (EVP) na Chad Pollitt (Dir. Nke Social Media & Search Marketing) nke Kuno Creative gosipụtara "Mobile Inbound Marketing." Ihe ngosi ahụ gosipụtara ebe ahịa ahịa ekwentị anọ dị mkpa na echiche:
1. Mobile nrụọrụ
Mobile website chepụta usoro kacha mma
Ma aka nke weebụsaịtị na mobile
Ọgụgụ weebụ web nwere ọgụgụ isi
Iche nrụọrụ weebụ dị iche iche na ntanetị ime ihe
Ihe kacha mma maka weebụsaịtị weebụ
2. Mobile Ngwa
Uru & ọghọm nke ngwa
Ebe nrụọrụ weebụ na ngwa
3. Izi ozi ederede SMS / Text
Ọnụọgụgụ na ọnụọgụ mmadụ
SMS mkpọsa ihe atụ
SMS mkpọsa ije-site
4. Koodu QR
Ihe omuma atu nke QR
Mgbasa ozi QR na-agagharị
Ọzọkwa, ngosi ahụ nyochara teknụzụ na ngwaọrụ nke na-enye ohere maka nkenye siri ike nke mkpọsa ahịa mkpanaka ma na-atụle ụzọ a ga-esi jikọta ekwentị na mkpọsa na ntanetị na nke ugbu a. Fọdụ n'ime ngwaọrụ ndị a tụlere gụnyere Weghara ya site na 44Doors, MoFuse na HubSpot.
Mobile inbound marketing abughizi ihe okomoko maka ndi ahia ka ha chebara echiche. Dabere na ọnụ ọgụgụ, ojiji na ọnọdụ ọ bụ ihe achọrọ maka ụlọ ọrụ na ụdị ndị chọrọ iru ma kpọtụrụ ha igwe mmadụ ha. Ndị na-ahọrọ ịghara ịhapụ ịhapụ ndị na-asọmpi ndị ahụ na-ahọrọ ịkwalite ikike nke azụmaahịa mbugharị mbugharị. Maka ozi ndị ọzọ, nweere onwe gị ile vidiyo zuru ezu nke mobile inbound ahịa ngosi.
Tags: Mobile na Mbadamba ụrọMkpokọta Weebụ MobileKoodu QRSMS